Athletic Bilbao oo balan kaga sameystay Real Madrid finalka koobka Spanish Super Cup kaddib markii ay ka garaacday Atletico Madrid … +SAWIRRO – Gool FM
(Riyad) 13 Jan 2022. Athletic Bilbao ayaa balan kaga sameystay Real Madrid kulanka finalka koobka Spanish Super Cup kaddib markii uu ku garaacday Atletico Madrid 1-2, kulankii afar dhammaadka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Atletico Madrid iyo Athletic Bilbao ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 62-aaad kooxda Atletico Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay goolhaayaha Athletic Bilbao ee Unai Simón, dheesha ayaa sidaas ku noqotay 1-0.
77 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Athletic Bilbao ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay laacibkooda Yeray Álvarez kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Iker Muniain.
Daqiiqadii 81-aad kooxda Athletic Bilbao ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-2 ka dhigay da’ayarkooda Nico Williams.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 1-2 ay Athletic Bilbao kaga adkaatay Atletico Madrid, Bilbao ayaa balan kaga sameystay Real Madrid ifnalka koobka Spanish Super Cup oo lagu balansan yahay in la ciyaaro Axada soo socota.